Kambani NEWS |
Adjustable mubhedha chawo
Anogona Anoshamisa timu inovaka
ne admin pane 20-11-30
Sechinhanho chingangove chakanakisa chirongwa chekuvaka timu, Beajom yakatanga danho rekukwirisa rinogona kutengwa uye injinjini yekushandira uye chirongwa chekudzidzisa mumwaka we2020 wemwaka wekupedza mwaka weyunivhesiti musi wa16 Gumiguru 2020 paJiaxing University. Vanopfuura mazana matanhatu vadzidzi ve ...
Nekufambira mberi kwenguva uye nekusimudzira kwesainzi uye tekinoroji ……
Nekufambira mberi kwenguva uye kuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, zvinodiwa nevanhu zvemibhedha zvakatangawo kuchinja, kubva pamabhedhi echinyakare echinyakare kuenda kumabhokisi-echirimo mabhedha uye smart mibhedha. Mubhedha wakangwara ndiwo mubhedha unoshandisa mubatanidzwa wemabhodhi akawanda emubhedha kugadzirisa kukwirira kwe ...
Blog -Tokyo vatengi vanoshanyira 6S mill audit & inogadziriswa base & metiresi mill tour
ne admin pane 20-09-17
Mufananidzo naSirius Ding Tokyo agency Mr. Tanaka vakabatana naBeajom kwemwedzi mishoma ikozvino. Yedu kunze kwenyika inogadziridzwa mubhedha hwaro uye inoenderana yakakwenenzverwa metiresi kuNorth East Asia musika iri kugara ichiwedzera 23% yakakwira YOY. Asi vakadzivirirwa nematare eCOVID-19, VaTanaka vakadzokorora kusundira kushanya kwedu ...
Yakabatanidzwa mhinduro pane kufambira mberi kweViet yedu ...
Nekufambira mberi kwenguva uye iyo de ...
Blog -Tokyo vatengi vanoshanyira kwe6S mil ...
1505, World Financial Center, 100 Zhuyuan Road, Jiaxing Guta, Zhejiang Province, China
Fonera Isu Zvino: +86 13795269951